ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုမလဲ။ Online Online️အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေပါ
ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုမလဲ။ အကြမ်းဖက်သည့်အခါဆက်ဆံရေးရှိတတ်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်ထိန်းချုပ်ရန်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရ။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း၊ ရိုင်းစိုင်းသော ဆက်ဆံရေးမှ ရုန်းထွက်ပြီး အကူအညီတောင်းခြင်းသည် ကောင်းပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကမင်းကိုနှိပ်စက်တာကိုမလိုလားဘူး။
အလွဲသုံးစားမှုသည်ဆက်ဆံရေးအမျိုးအစားများစွာတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရည်းစားများ၊ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ မိဘများနှင့်ကလေးများ၊ မောင်နှမများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား …ယေဘူယျအားဖြင့်အစိုးရိမ်ရဆုံးကိစ္စများသည်မိသားစုအတွင်း၊ အိမ်တွင်ဖြစ်ပွားသောအကြမ်းဖက်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအားလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည် အချစ်ကိုသစ္စာဖောက်ပါ.
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများသည်တစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီကိုလုံခြုံမှု၊ ချစ်ခင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးရန်ဖြစ်သည်မရ။ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအကြမ်းဖက်ခံရသောအခါအနိုင်ကျင့်ခံရသူသည်ယုံကြည်သူအားသစ္စာဖောက်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုသည်လူတို့အကြားပဋိညာဉ်ကိုသစ္စာဖောက်ပြီးအပြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 သမ္မာကျမ်းစာအရ ကြမ်းတမ်းသောဆက်ဆံရေးကို မည်သို့အသိအမှတ်ပြုမည်နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ကြမ်းတမ်းသောဆက်ဆံရေးကို မည်သို့အသိအမှတ်ပြုမည်နည်း။
ကြမ်းတမ်းသောဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့အသိအမှတ်ပြုမည်နည်းကြမ်းတမ်းသောဆက်ဆံရေးသည်မည်သည့်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးမဆိုအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောမေတ္တာ၊ လေးစားမှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုမလိုက်နာပါ။ အခြားသူသည်အောက်ပါပုံစံများကိုလိုက်နာလျှင်အဆိပ်သင့်သောဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Te ကြိုးကိုင်သည်: မင်းမလုပ်ချင်ဘူးလို့ ရှင်းပြရင်တောင်မှ အဲဒီလူလိုချင်တာကို မင်းအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။
စိတ်ခံစားမှု blackmail ကိုသုံးပါ။ သူကမင်းကိုအရာအားလုံးအတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတာဒါမှမဟုတ်သူ့အမိန့်အတိုင်းလုပ်ဖို့မင်းကိုဖိအားပေးတယ်။
အမှန်တရားကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပါ။ သူ၏ဗားရှင်းသည်မကိုက်ညီပါ၊ သူသည်အမြဲသူရဲကောင်းသို့မဟုတ်သားကောင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူး။
မင်းကိုအရှက်ရစေတယ်: သင့်အားအော်ဟစ်စော်ကားပြောဆိုခြင်း၊ မင်းနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်လူအများရှေ့တွင်အရှက်ရစေသည်
ငါမင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် မင်းကိုအရမ်းခက်တယ်၊ ထိတယ်၊ ကန်တယ်၊ တွန်းတယ်၊ မင်းကိုအရာဝတ္ထုတွေနဲ့နံရံကိုတွန်းတယ်။ မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးအစားမဆို။
ရိုင်းစိုင်းသောလူသည် အထီးကျန်နေသည်- သူကမင်းကတစ်ခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာ၊ မင်းသိပြီးသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတာကိုမကြိုက်ဘူး။
ရန်လိုသူသည်သင့်အားခြိမ်းခြောက်သည် (သို့) ခြိမ်းခြောက်သည်ဘယ်သူကမှမင်းကိုချစ်ဖို့၊ ကူညီမှာမဟုတ်ဘူး၊ သူမရှိရင်မင်းရှင်သန်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သူကမင်းဆီကအရာအားလုံးကိုယူလိမ့်မယ်၊ သူကမင်းကိုနာကျင်အောင်၊ သတ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုချစ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်သတ်သေလိမ့်မယ်။
လိင်ဆက်ဆံခိုင်းခြင်း- သင်မပြောဘဲနေသော်လည်းဤသူသည်သင့်ကိုတွန်းအားပေးသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် မုဒိမ်းမှုဖြစ်ပြီးဒါဟာရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုပါ။
ဤအရာတစ်ခုခုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည် ဆက်ဆံရေးတွင်အလွန်မှားယွင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲပစ်ရမည်မရ။ အခြေအနေအကြောင်းသင်စိတ်ရှုပ်ထွေးပါကအခြားသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ရင်းနှီးမှုပိုရှိလေ၊ အကြမ်းဖက်ဆက်ဆံရေးကပိုရှုပ်ထွေးလာလေဖြစ်သည်။ ဟိ ပြဿနာကိုအပြင်လူတစ် ဦး ကကြည့်ခြင်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာအလွဲသုံးစားမှုကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သင့်အားမတရားပြုကျင့်မှုအောက်တွင်မနေလိုပါ။ မတော်မတရားဆက်ဆံရေးသည်သင့်အတွက်အလွန်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်သည့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သင်၏သေဆုံးခြင်းသို့ပင် သေခြင်း ချစ်ရသူ၏ ဘုရားသခင်ကမင်းရဲ့ဘဝအတွက်ဒါကိုမလိုချင်ဘူး။ ဒါကမာရ်နတ်ရဲ့အလုပ်ပဲ။
သင်မှန်လျှင် ရက်စက်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ပါချိုး! ရှင်းပြချက်တွေမပေးသင့်ဘူး။ အခြေအနေတွေပိုမဆိုးခင်အခုဆက်ဆံရေးကနေထွက်သွားလိုက်ပါမရ။ ဒါကမင်းကိုလက်ထပ်ဖို့မှန်ကန်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ အခြေအနေအရပ်ရပ်မှ ထွက်ပြေးပါ။
အဆိုပါ အကယ်. အဆိပ်ရှိသောဆက်ဆံရေးသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်ပေါ်သည်ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒါကခင်မင်မှုမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်အခြားအလုပ်တစ်ခုကိုရှာကြည့်မလား။ လစာနည်းတဲ့အလုပ်တောင်မှဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာနေရတာထက်ပိုကောင်းတယ်။
အလွဲသုံးစားမှုတွေ ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်ပါ။ matrimonioမပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်၊ သင်လုပ်သင့်သည်။ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကုသမှုတွင်ပါ ၀ င်လိုစိတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါမရ။ တစ် ဦး ၏ကိစ္စရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုမှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အိမ်မှထွက်သွားပါ။ ဤသူသည်သင် (သို့) သင့်ကလေးများကိုထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်
ကွာရှင်းပြတ်စဲတာမဟုတ်ရင်တောင် ခွဲခွာရမည့်အချိန်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်မရ။ ၎င်းသည်သင့်အားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမှပျောက်ကင်းရန်နှင့်အရာများအားရှုထောင့်သို့ထည့်ရန်အချိန်ပေးပါလိမ့်မည်။ သူလည်း ရန်လိုသူသည်မိမိ၏အမှားများကိုနားလည်ရန်နှင့်သူ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်သဘောတူသည် (ဒါပေမယ့် သတိထားပါ၊ ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး)။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ကောင်းမှုကို လိုလားသည်၊ သင်၏အဆိုးကို လိုချင်သည်။ မတော်မတရားပြုသူနှင့်အတူနေရမည်ဟုမခံစားရပါနှင့်။
ကျေးဇူးပြု၍ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသည်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤအခြေအနေအားရဲသို့သတင်းပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ငယ်ငယ်တုန်းကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးကိုပြောပါ။ အိမ်တွင်မတော်မတရားမှုများဖြစ်ပွားလျှင် သင်ယုံကြည်ရသော ဆရာ၊ ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အခြားအာဏာပိုင်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောပါ။မရ။ သင့်အားစော်ကားသူအားသစ္စာမရှိ၊ ဤသူသည်သင့်အားထိုသို့ပြုပိုင်ခွင့်မရှိချေ။
ဤအခြေအနေအားလုံး၌မမေ့ပါနှင့်။ ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိသည်မရ။ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရဲ့ သားကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ တရားမျှတမှု ဘုရားကမင်းဘက်မှာရှိတယ်. ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပြီး အကူအညီရယူပါ။မရ။ မင်းကမင်းကိုအနိုင်ကျင့်တာကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတစ်ယောက်တည်းတိုက်စရာမလိုဘူး။ ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးကမင်းနားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် အကြမ်းဖက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဤအခြေအနေ၌ခရစ်ယာန်တစ် ဦး အားမည်သို့ပြုမူသင့်သနည်း။ သိချင်နေပြီဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းမင်းကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မလဲ, ဆက်လက် browsing Discover.online ။